Ukuqondisa ku-Printer Bank Power A3 China Manufacturer
Incazelo:Ukuqondisa kwi-Power Bank iphrinta yezindleko,Phrinta ku-Printer Bank Power Printer,Ukuqondisa ku-Printer Bank Power A4
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Power Bank > Ukuqondisa ku-Printer Bank Power A3
Umshini uhambisana kahle futhi usebenzise kabanzi.Ungaphrinta isithombe (ukuklama) kunoma iyiphi udonga.
Iphrinta ye-Power Bank iyashesha futhi iyabiza. Asikho isidingo sefilimu. Noma iyiphi isofthiwe yokukhipha kanye nedokhumenti isekelwe.
Kukhona isofthiwe ephathekayo yokuphatha umbala.Umbala ungashintsha nganoma isiphi isikhathi futhi akudingeki ukhokhe izindleko ezengeziwe.
Ukuqondisa ku-Power Bank Bank Printer A3 Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yeselula, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, i-KT board , itshe, i-silica gel, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
4.Printa ngesistimu yokuvikela ikhanda, lungisa ukuphakama ngokuzenzakalelayo. Ingavikela ikhanda lephrinta ukuthi lingaboni, akukho sidingo sokulungisa ibanga lokushicilela ngesandla ngenkathi liphrinta.
Izici ezizuzayo ze- Direct Direct to Power Bank Printer Price RF-A3UV:
Ohlakaniphile: 1. Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Amaphrinta aphrinta ndawonye (umhlophe + umbala / umbala + omhlophe);
3. Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta I-A4 cartridge ine-sensor Detecting sensor, uma inkinozi iphelile kuyobe ivusa;
Ukuqondisa kwi-Power Bank iphrinta yezindleko Phrinta ku-Printer Bank Power Printer Ukuqondisa ku-Printer Bank Power A4 Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta Qld Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Xpress Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta i-Jam Eqondisa ku-Power Bank iphrinta yegatsha Ukuqondisa ku-Power Bank Printer Ebay